Fifaninanana - iPhone News | Vaovao IPhone
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia tianay ihany koa ny manaraka akaiky ny hetsika izay manamarika ny fifaninanana avy amin'i Apple. Mihabetsaka, ny iOS dia mila miatrika terminal terminal avo lenta izay misongadina amin'ny fanolorana karazana endri-javatra maro karazana sy rafitra fandidiana hafa, indrindra ny fanasongadinana ny anjara asan'ny Android, Windows Phone na BlackBerry OS ankoatry ny hafa. Raha te hahafantatra ianao hoe iza no mpifanandrina mivantana indrindra amin'ny iPhone dia eto no hahitanao hoe iza izy ireo ireo finday avo lenta matanjaka indrindra eny an-tsena.
Apple ihany no mahatratra isa tsara amin'ny fivarotana smartphone hatramin'ity taona ity
ny Tony Cortes hace Herinandro 4 .
Vao nivoaka ny tombam-bidin'ny smartphone amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity, ary i Apple no...
ny alex vincent hace Herinandro 4 .
Ny Android dia mitohy, tsy isalasalana, mitarika ny tontolon'ny rafitra fiasana finday amin'ny resaka isan'ny mpampiasa…
Ny fampiharana "Switch to Android" dia hanafatra ny angonao avy amin'ny iCloud mankany amin'ny Google Photos
Efa ela izahay no naneho hevitra momba ny drafitra tsy maintsy ametrahan'i Google fampiharana iray mba hahafahan'ny fanovana…
ny Ignatius Room hace 3 volana .
Ny orinasa Fitbit, izay eo am-pelatanan'ny Google ankehitriny, dia nanambara ny fanesorana ny modely Ionic amin'ny tsena, modely iray izay…
Araka ny fitsapana natao tamin'ny Geekbench 5 nataon'i PCMag, ny valin'ny iPhone 13 sy ny Samsung vaovao…
Apple dia mety hihoatra ny Samsung amin'ny fizarana tsena amin'ny telovolana farany amin'ny 2021
ny Ignatius Room hace 6 volana .
Samsung no mpanamboatra finday lehibe indrindra eran-tany nandritra ny taona maro. Na izany aza, araka ny filazan'ny orinasa sinoa ...
Apple dia tsy afaka manemotra ny fampiharana ny vavahady fandoavam-bola hafa ao amin'ny App Store
Na dia tsara kokoa ho an'i Apple aza ny vokatry ny fitsarana teo amin'ny Apple sy ny Epic Games noho ny Epic, ny mpitsara ...
Samsung dia maneso an'i Apple amin'ny fanomezana ny lamba fanadiovana azy manokana
ny Jordi Gimenez hace 7 volana .
Samsung dia namoaka lamba fanadiovana manokana ho an'ny mpanjifan'ny orinasa izay ao anatin'ny programa Samsung ...
Manaraka ny dian'i Apple i Samsung ary mamela ny fandefasana ny adiresin'ny navigateur mankany ambany
Nandritra ny volana vitsivitsy izao dia manana iOS 15 izahay, rafitra fiasa vaovao ho an'ny iDevices tamin'ny herinandro lasa ...
Voasivana ny sary voalohany amin'ny smartwatch Facebook
ny Tony Cortes hace 7 volana .
Toa te hanandrana ny vintana amin'ny tontolon'ny fitaovana elektronika i Mark Zuckerberg. Tsy ampy ny manana...
Raha ny filazan'ireo tovolahy ao amin'ny Protocol, ny mpamokatra mpandahateny Sonos dia te-hanapaka ny fifaninanana tsy mitsaha-mitombo ...